US, UK, France neGermany vanokurudzira vagari vemo kuti vabve kuEthiopia izvozvi
musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose » Ethiopia Kupwanya Nhau » US, UK, France neGermany vanokurudzira vagari vemo kuti vabve kuEthiopia izvozvi
Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose • Kuputsa Kufamba Nhau • Bhizinesi Kufamba • Ethiopia Kupwanya Nhau • France Kuputsa Nhau • Germany Kuputsa Nhau • Hurumende Nhau • Kodzero Dzevanhu • nhau • vanhu • Kutarisirwa • chengetedzo • ushanyi • Kufamba Wire Nhau • Trending Now • UK Kuputsa Nhau • USA Kuputsa Nhau
Vatorwa vakarayira zvakasimba kuti vabve muAddis Ababa
Kunetsana kwazvino kwakaitika kuChamhembe kweEthiopia gore rapfuura, apo hurumende yemubatanidzwa yakatanga kurwisa boka revakapanduki, reTigray People's Liberation Front (TPLF).
Pakati pekutya kwevapanduki vanoenda kuguta guru reEthiopia, Addis Ababa, hurumende dzakawanda dzekuMadokero dziri kukurudzira vagari vadzo kuti vabve kuEthiopia nekukurumidza.
Bazi rezvekunze reGermany pamwe nemuzinda weFrance muAddis Ababa vaburitsa mashoko akasiyana nhasi vachiyambira chero zvizvarwa zvaro munyika kuti zvibude pasina kunonoka. IUS neUnited Kingdom nguva pfupi yadarika dzakapa kurudziro yakafanana kune vagari vadzo.
The United Nations (UN) yakasimbisawo kuti yanga ichishanda 'kutamisa' nhengo dzemhuri dzevashandi vayo vekunze kubva kuEthiopia kwenguva pfupi nekuda kwekushata kwemamiriro ekuchengetedza pasi.
Pakutanga mwedzi uno, vashandi makumi maviri nevaviri vekuEthiopiya vakasungwa uye vakavharirwa nemauto ehurumende panguva yekupambwa Addis Ababa yakanangana nemadzinza eTigrayans, UN yakati. Vamwe vakazosunungurwa.
Boka iri, iro rakanga ratonga nyika kwemakore risati radzingwa muna 2018, mumwedzi ichangopfuura rakakwanisa kudzora matunhu mazhinji ekuchamhembe kweTigray, kusanganisira guta guru reMekele. NeChipiri, TPLF yakati yakanga yatora Shewa Robit uye yakanga ichienda Addis Ababa, anenge makiromita 220 (136 mamaira) kubva.